Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Burburinta magaalada miyay magdhow siin kartaa yaraanta dadka safarka ah ee ganacsiga?
Cilmi baaristu waxay muujineysaa in seddex meelood meel dadka qorsheynaya safar dibadeed 2022 ay rabaan inay ballansadaan fasax magaalo ay soo dhaweynayaan guddiyada dalxiiska, silsiladaha hoteellada iyo waaxda duulista - fasax-bixiyeyaashu waxay aad u jecel yihiin inay soo kabsadaan waqtiga lumay, qaar badanna waxay badbaadiyeen lacag ku filan si aad u ballansato laba ama in ka badan oo bixitaannada sannadka.
Ku dhawaad ​​​​saddex meelood meel dadka Ingriiska ah ee qorsheynaya fasaxa dibedda 2022 waxay rabaan inay ballansadaan fasax magaalo, ayaa daaha ka qaaday cilmi baaris ay maanta (Isniin 1 Noofambar) soo saartay WTM London, oo ah hormuudka munaasabadda caalamiga ah ee warshadaha safarka.
Warbixinta Wershadaha WTM, ra'yi ururin 1,000 macaamiisha ah, ayaa lagu ogaaday in 648 ay qorsheynayeen inay qaataan fasaxa dibadda sanadka 2022 - magaalooyinkuna waxay ahaayeen doorashada labaad ee ugu caansan, ka dib doorashada ugu doorbiday ee xeebta.
Helitaanka in 30% ay rabaan inay qaataan fasaxa magaalada sanadka soo socda waxay u noqon doontaa kor u qaadida huteelada iyo duullimaadyada Yurub oo dhan, kuwaas oo ay si xun u saameeyeen hoos u dhaca ba'an ee safarka ganacsiga iyo dhacdooyinka xilli masiibada.
Ururka Socdaalka Ganacsiga ayaa qiyaasaya in, sannadkii caadiga ahaa, £220 bilyan lagu daro UK GDP, taas oo ay ugu wacan tahay safarrada safarka ganacsiga ee ka soo jeeda UK.
Ururku wuxuu sheegay inay jireen ku dhawaad ​​sagaal milyan oo safarro ganacsi oo ka yimid UK sanadka 2019, taasoo keentay in ku dhawaad ​​50 milyan oo habeen la hoydo - iyadoo in ka badan kala badh ay ahaayeen wax ka yar saddex habeen.
Sidoo kale, dadka safarka ah ee ganacsigu waxay ku xisaabtamaan 15-20% macaamiisha shirkadaha diyaaradaha iyo, waddooyinka qaarkood, waxay labanlaab ka faa'iido badan yihiin safarrada firaaqada ah.
Si kastaba ha noqotee, shirkadaha maaraynta safarku waxay arkeen hoos u dhac ku yimid dakhliga inta lagu jiro aafo ilaa 90%.
Marka loo eego dhaqaalaha dalxiiska, oo ah shirkad Oxford Economics ah, meelaha magaalooyinka loo aadi jiray waxaa si gaar ah u saameeyay masiibada, qayb ahaan sababtoo ah hoos u dhaca safarka ganacsiga iyo dhacdooyinka.
Intaa waxaa dheer, saadaaliyayaashu waxay yiraahdaan soo kabashada safarka ganacsiga waxay dib u dhici doontaa dib u soo kabashada firaaqada.
Meel kale, Financial Times ayaa soo warisay sida boodhadhka dalxiiska iyo huteelada Yurub ay wax badan u maalgashanayaan suuqa raaxada si ay uga guuraan ku tiirsanaanta qaabka qorraxda-ciid-iyo-badda - isbeddel kaas oo sidoo kale ka caawin doona barkinta xarumaha magaalada. hoos u dhaca macaamiisha safarka ganacsiga.
Fasaxyada dhaqameed ee xeebaha ayaa sii ahaan doona baahida - sida natiijooyinka ka soo baxa warbixinta WTM ee London ay muujinayaan - laakiin fasaxyada magaalada waxay siinayaan fursad silsiladaha hoteelada si ay u galaan baahida masiibada ka dib ee macaamiisha si ay u galaan baxsasho raaxo leh oo ay ku qaataan kaydkooda ilbiriqsiyo ama fasaxa saddexaad inta lagu jiro 2022.
Isbeddelku wuxuu sidoo kale caddayn karaa inuu yahay isbeddel muddo dheer ah sidoo kale, sida cilmi-baarista Bloomberg waxay soo jeedinaysaa in shirkadaha waaweyn badankood ay qorsheynayaan inay kharash yar ku bixiyaan safarka ka dib faafitaanka - qalabka isgaarsiinta internetka, kaydinta kharashka iyo bartilmaameedyada joogtada ah oo dhan waxay la macno tahay in hoteellada iyo diyaaradaha laga yaabo inay ku tiirsan safarro shirkadeed ka yar mustaqbalka sidii ay ahaan jireen ka hor Covid-19.
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga WTM ee London, ayaa yidhi: "Nasinta xannibaadaha safarka ee bisha Oktoobar waxay siisay dhiirigelin dhammaan dadka safarka ah ee ku sugan UK - laakiin, sida safarka ganacsigu u muuqdo inuu sii ahaan doono mid hoos u dhacaya 2022, suuqa xilliga firaaqada wuxuu noqon doonaa mid muhiim ah si loo caawiyo magdhow wixii dhiman.
"Cilmi-baaristeenna waxay muujineysaa in saddex-meelood meel dadka qorsheynaya safar dibadda ah 2022 waxay rabaan inay ballansadaan fasax magaalo ay soo dhaweynayaan guddiyada dalxiiska, silsiladaha hoteellada iyo waaxda duulista - fasax-bixiyeyaashu waxay aad u jecel yihiin inay soo kabtaan waqtiga lumay, qaar badanna waxay badbaadiyeen ku filan lacag si aad u ballansato laba ama in ka badan oo aad ka baxdo sanadka.
"In badan oo iyaga ka mid ah waxay ku faraxsan yihiin inay u cusbooneysiiyaan waayo-aragnimo raaxo leh, oo la xasuusto - taas oo siin doonta fursadaha kuwa ku jira qaybta martigelinta si ay u noqdaan kuwo hal-abuur leh suuqgeyntooda oo ay dib ugu dhisaan ilo dakhli oo cusub."